China yakaderera kabhoni simbi pena fekitari uye vagadziri | TAA
Yakasimba simbisa, kukwirira kwakasimba, hupenyu hurefu hwebasa.
Kuputsa kwakaderera, guruva rakadzika, kusvibiswa kwakadzika.
Kuderera kupfeka kwemidziyo, hupenyu hwakareba hwechishongedzo.
Deredza dedusting system mutoro, regedza mashandisiro nguva yekurasa zvigadzirwa.
Zvimwe zvealloy element
Kuwedzera Cr Mo Ni B Al Cu etc.
Duplex chimiro chakabatanidza Martensite neBainite
Kuneta Hupenyu Bvunzo
Kushandiswa Kusiyanisa Mufananidzo we TAA LCB simbi yakapfurwa, yakaderera-kabhoni simbi yakapfurwa uye yakakwira-kabhoni simbi yakapfurwa. (kuneta hupenyu bvunzo yeyakajairika mamakisi pane inokanganisa kumhanya chiyero che60.96m / s)
Kushandiswa kusiyanisa-Giredhi rakajairwa
Kubudikidza nehupenyu hwekuneta bvunzo isu tinogona kuona izvo: hupenyu hwebasa reTAA LCB Simbi Pfuti iri 1.5 zvakapetwa zvakapetwa kupfuura zvakajairwa pasi kabhoni simbi kupfura, kaviri zvakapetwa kupfuura yakakwira kabhoni simbi kupfurwa.
Pashure: Stainless simbi grit
Zvadaro: Aluminium yakatemwa waya
Chiwanikwa Low Carbon Pfuti
Blasting Yakaderera Carbon Simbi Yakapfura
Ferrosad Yakadzika Carbon Simbi Yakapfura
Yakadzika Carbon Bainite Simbi Yakapfura
Yakadzika Carbon Simbi Yakapfura Yekutarisa
Yakadzika Carbon Simbi Shot Mugadziri
Yakadzika Carbon Simbi Shot S110
Yakaderera Carbon Simbi Pfura S170
Yakadzika Carbon Simbi Shot S230
Yakadzika Carbon Simbi Shot S280
Yakadzika Carbon Simbi Shot S330
Yakadzika Carbon Simbi Shot S390
Yakadzika Carbon Simbi Shot S460
Yakadzika Carbon Simbi Shot S550
Yakaderera Carbon Simbi Pfura S660
Yakadzika Carbon Simbi Shot S70
Yakaderera Carbon Simbi Pfura S780
Yakadzika Carbon Simbi Shots
S110 Yakadzika Carbon Simbi Yakapfura
Tocelik Yakadzika Carbon Simbi Yakapfura
Isu takaita shanduko huru muzvinhu uye nehunyanzvi pahwaro hwetsika yekugadzira maitiro. Tichishandisa yepamusoro chiwanikwa chiwanikwa simbi waya seiyo substrate iyo inokwidziridza zvemakanika zvivakwa uye ita kuti igadzikane. Kuvandudza wiredrawing hunyanzvi hunoita kuti yemukati kurongeka iwedzere. Kuvandudza tsika yechinyakare yekuzvivimba iyo inovimba zvizere pakukanganisa kudzikisa kukanganisa panguva yeblastin ...
Aluminium yakatemwa waya pfuti inonziwo searuminiyamu kupfura, aruminiyamu marozari, aluminium granules, aluminium pellet. Yakagadzirwa kubva pamhando yepamusoro aruminiyamu waya, chitarisiko chakajeka, inyanzvi yemidhiya yekuchenesa nekusimbisa pamusoro peasina kufanira simbi yekukanda zvikamu. Inonyanya kushandiswa pakurapwa kwepamusoro kweAluminium, Zinc zvigadzirwa kana zvidimbu zvebasa nemadziro matete mupfuti yekuputika muchina. Tech Dhata Zvigadzirwa Alum ...
Tech Dhata Chigadzirwa Tsananguro Mhangura Yakatemwa Wire Shot Chemical Kuumbwa Cu: 58-99%, iyo yasara ndeye Zn Microhardness 110 ~ 300HV Tensile Intensity 200 ~ 500Mpa Kugadzikana 5000 Nguva Microstructure Yakaremara αorcy + β Density 8.9 g / cm3 Bulk Density 5.1 g / cm3 Inowanikwa hukuru: 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm nezvimwewo Kubatsira 1. Hupenyu hwakareba nguva 2. Pasina Guruva 3. Yakananga g ...